Imihlangano e-Durres - Via Hotels
Okokuzithokozisa e- Tirana
Ukuphila kahle e-Durres
Ukuphila kahle eSaranda
Sinezindawo zayo yonke imicimbi yakho!
Jabulela ukwamukela ngemfudumalo emahhotela ayiqiniso kakhulu e-Albania, izindawo zokungcebeleka, ama-villas nama-aparthotel.
Izindawo zenkomfa eDurres
Uma ufisa ukubamba ingqungquthela noma umhlangano wakho e-Albania's Durres, khona-ke wenze ukukhetha okuhle. Umlando we-cool Durres uhlehlela emuva eminyakeni engama-406, lapho isiko nesiko lesimanje kuhlangana ngendlela ejabulisayo. Idolobha liseduze namapaki amahle kanti futhi lijabulela indawo ephilayo yedolobha.
Izindawo zenkomfa namagumbi okuhlangana e-DURRES
Ngokwemvelo, sinezinhlobonhlobo zezinsiza zenkomfa namagumbi okuhlangana e-Durres okwenza kube lula kuwe ukuhlangana. Sinikeza izingqungquthela nemihlangano yawo wonke amasayizi noma ngabe ucabangela imisebenzi yokwakha iqembu, imidlalo yokuqala noma umcimbi wenkampani. Sikusiza ukuthi uthole indawo yenkomfa ukuze wenze ingqungquthela yakho ibe yimpumelelo.
Amahhotela ethu enkomfa eDurres
Ihhotela & Indawo yokudlela
I-VH Belmondo Hotel iyinketho efanelekile yebhizinisi lakho nohambo lokuzijabulisa e-Albania sibonga indawo yethu enhle eduze nolwandle.Ngesitayela sesimanje esincane, i-Western Star Hotel inamakamelo angu-30 avulekile aklanyelwe ngokukhethekile ukunethezeka kwezivakashi zethu. Wonke afaka i-Wi-Fi enesivinini esikhulu, isiphephetha-moya ngasinye kanye nezindlu zokugezela ezizimele.
I-VH Prime Villa Pascucci Durres
I-VH PRIME Villa Pascucci iyinketho efanelekile yebhizinisi lakho nohambo lokunethezeka lokunethezeka e-Albania sibonga indawo yethu enhle eduze nolwandle. Ngesitayela sesimanje esincane, i-PRIME Villa Pascucci inamakamelo angu-50 avulekile aklanyelwe ngokukhethekile ukunethezeka kwezivakashi zethu. Wonke afaka i-Wi-Fi enesivinini esikhulu, isiphephetha-moya ngasinye kanye nezindlu zokugezela ezizimele.
I-VH Western Star Durres
I-VH Western Star Hotel inketho efanelekile yebhizinisi lakho nohambo lokuzijabulisa e-Albania sibonga indawo yethu enhle eduze nolwandle. Ngesitayela sesimanje esincane, i-Western Star Hotel inamakamelo angu-30 avulekile aklanyelwe ngokukhethekile ukunethezeka kwezivakashi zethu. Wonke afaka i-Wi-Fi enesivinini esikhulu, isiphephetha-moya ngasinye kanye nezindlu zokugezela ezizimele.
Bhalisela Okunikezwayo Okukhethekile Okuvela Kithi
UTIRANA • DURRES • USARANDA
Ngehhotela © 2020. Wonke Amalungelo Agodliwe.